Usuku olwafaka uRamaphosa ekukhulumeni | Bayede News
Home/ iBayede Kuleli Sonto/Usuku olwafaka uRamaphosa ekukhulumeni
LIMI NGOTHI: UMengameli uRamaphosa obhekene nokukhuluma okumangalisayo
Kupolitiki kwejwayelekile ukuthi umengameli wezwe ahlehlelwe yizikhuni ikakhulukazi uma esebusa ihlandla lokugcina. Ziningana izizathu ezenza lokhu, esinye sazo wukuthi abantu asuke ebahola okungamalungu eKhabhinethe basuke sebebuka ngale kwakhe, bebheka ozophatha emuva kwakhe.
Emlandweni waseNingizimu Afrika lokhu kubonakele ngesikhathi sikaMengameli uMbeki kanye noZuma. Ngesikhathi beqala ukubusa laba baholi wonke umuntu kusuka eqenjini labo i-African National Congress (ANC) nakuHulumeni babebaseka. Lokhu kwabe kungasho ukuthi wonke umuntu uvumelana nabo kepha wonke umuntu wayelandela uholo lwabo nokuthe kungafika izinyanga zokugcina zokuphatha, uHulumeni neqembu, kwabonakala okwehlukile.
Kungenxa yalo mlando mhlawumbe nokwejwayela okwenze izigameko ezenzeka kuMengameli uRamaphosa zethusa futhi zamangaza abaningi kubandakanya nalabo abamesekayo nongoti. Lo mholi osahlale kwesobumengameli izinyanga ezintathu vo ubukeka enegcindezi emangalisayo nokungathi uma engayiphumeleli impi abhekene nayo akhale ngaphansi nokungamenza uMengameli ohlale isikhathi esifushane kunabo bonke. Lezi zinyanga ezintathu azibali isikhathi lapho ayebambe khona emuva kokwesula kukaMnu uZuma kepha yizinyanga lapho ebe nguMengameli wezwe ngenxa yevoti. URamaphosa ugcotshwe ngokusemthethweni njengoMengameli mhla zingama-25 kuNhlaba nonyaka.
Kuliqiniso ukuthi uRamaphosa ube linoni kuleli nangaphandle kwemingcele kukholakala ukuthi uzofika nokungcono ekubhekaneni nomnotho nokuvusa isithunzi sakuleli ebese sidicileleke phansi ngenxa yemibiko yenkohlakalo nezinsolo zokugwamandwa kombuso. Izinkulumo zakhe beziqinisa iningi idolo ekutheni elakuleli lizophuma obishini.
Konke lokhu kuqale ukushabalala ngomhla ziyisi-6 kuLwezi ngowezi-2018. Ngalolu suku uRamaphosa ubuzwe umbuzo oqondile ngumholi weqembu eliphikisayo, uMhlonishwa uMmusi Maimane nowabuza ngobuqiniso bokuthi indodana kaMengameli yacosha insulamlomo eyizi-R500 000 enkampanini iBosasa neyabe ilandelwa yiphunga emuva kokuvela kwezinsolo kuKhomishini ephenya ngezinsolo zokugwamandwa kwamandla ombuso. Le mali kuthiwa yakhokhwa mhla zingama-27 kuMfumfu ikhokhwa yibhange u-Absa. Lokhu kufakazelwe nayiloyo owayifakayo uMnu uVenter othi esitatimendini sakhe esifungelwe wayeyalelwe nguMnu uWatson owabe eyiSikhulu Esiphezulu kwaBosasa.
Ephendula ngalo mbuzo kaMaimane uRamaphosa waqinisekisa owayebuzile neNdlu yonke ukuthi le nkokhelo yabe iqondile, kuwumhlomulo womsebenzi owabe wenziwe yindodana yakhe. Eneqiniso lalokhu uMengameli waze washo nokusho ukuthi uma ngabe le mali ingenxa yenkohlakalo yena luqobo ‘uyohambisa indodana yakhe emaphoyiseni’.
Akuphelanga zinsuku zingaki esho kanjalo wabuye wahoxisa lawo magama encwadini ayeyibhalele uSomlomo mhla zili-14 kuLwezi. Kule ncwadi wazithethelela uRamaphosa wathi: “Impendulo yami kulo mbuzo yayisekelwe ulwazi enganginalo ngaleso sikhathi olumayelana nobudlelwano bezamabhizinisi inkampani yendodana yami enabo nenkampani i-African Global Operations,” kufundeka incwadi kaRamaphosa.
Yaqhubeka yathi: “Ngibuye ngathola ukuthi inkokhelo okukhulunywa ngayo ayiphathelene nalobo budlelwano. Ngitshelwe ukuthi inkokhelo umholi weqembu eliphikisayo aqondise kuyo yileyo eyakhokhwa ngomele uMnu uGavin Watson ku-akhawunti eyayisebenza ukuqoqa izimali zomkhankaso eyavulwa ukulekelela ukungenela kwami ukhetho lobumengameli be-African National Congress”.
Okwabe sekuvela wukuthi lesi samba semali empeleni sakhokhwa ku-akhawunti yethrasti eyenganyelwe ngabameli i-Edelstein Farber Grobler (EFG). Ibuzwa ngalolu daba inkampani yabameli yaphendula yathi: “UMnu u-Andile Ramaphosa akasiyo iklayenti yethu futhi akakaze abe yiklayenti ye-EFG kanti ne-EFG ayikaze yamukele mali egameni lakhe. Njengoba wazi, i-akhawunti yethrasti iyisifuba futhi ivunyelwe abakhethwa kuphela, ngakho-ke asikwazi ukudalula noma sineke imininingwane noma ulwazi mayelana ne-akhawunti yethrasti,” kusho isitatimende senkampani.
Ngasohlangothini lwayo indodana kaMengameli yakubeka kwacaca ukuthi nembala kayazani nale mali nokuthi inkampani yayo imsulwa: “Inkampani yami ihlala yenza izinto ngendlela eqondile. Uma kukhona ibhizinisi esilenza nabathile siyabatshela indlela esisebenza ngayo sibacele basayine inqubomgomo esivumelayo ukuthi singakunqamula noma yinini ukusebenzisana nabo uma kukhona ukungcola okuqubukayo. Asithathi ezinqamulelayo.” kuphetha indodana kaMengameli.
Namuhla uRamaphosa uvika izagila nsuku zaphuma nosekukhona nabathi, ‘naye uyafana nabanye’ ayethi uzophipha amangcolo abo. Kanti abanye bathe akahoxe esikhundleni. Konke lokhu kwadalwa ngumbuzo owodwa ePhalamende nowaphenduleka, uma sekubhekwa emuva kubonakala ubudedengu ngasohlangothini lukaMengameli.